Joe Biden oo magacaabaya Xoghayaha Gaashaandhigga
Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa Arbacada maanta ah si rasmi ah ugu dhawaaqi doona xulashadiisa xoghayaha difaaca oo uu u xushay Jeneraalka howlgabka ah Lloyd Austin, iyadoo ay jiraan walaac ay qabaan qaar ka mid ah xubnaha Congress-ka oo ku aadan in Pentagon-ka uu hogaamiyo qof rayid ah halkii uu ka noqon lahaa sarkaal militari.
Austin, oo noqonaya xoghayihii ugu horreeyay ee gaashaandhigga Mareykanka ee madow ah ayaa sumacaddiisa dhisay muddadii afartanka sano ahayd ee uu ka tirsanaa ciidamada Mareykanka oo ay ku jirto mar uu soo noqday Taliyaha Taliska Dhexe ee millatariga, kaasi oo dusha kala socda ciidadamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe.
Laakiin magacaabistiisa ayaa soo dedejineysa hannaan adag oo ansixintiisa ah ka dib markii ugu yaraan labo senator oo Dimuqraadi ah ay muujiyeen in ay ka soo horjeedaan in ay meesha ka saaraan sharci ansixintiisa xannibaya kaasi oo dalbanaya in madaxda sare ee milatariga ay ka maqnaadaan ciidamada qalabka sida ugu yaraan toddobo sano ka hor inta aysan qaban jagada ugu sarreysa Pentagon-ka. Austin oo 67 jir ah ayaa howlgab noqday sanadkii 2016-kii.
Biden, oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa maqaal uu Talaadadii ku daabacay wargeyska the Atlantic waxa uu ku booriyay Golaha Senate-ka Mareykanku in ay meesha ka saaraan sharcigaasi si ay taasi ugu ogolaato in Jeneral Austin "si deg deg ah" loo ansixiyo.
General Jim Mattis oo ahaa xoghayihii hore ee difaaca ee uu magacaabay Madaxweyne Donald Trump ayaa isna u baahnaa in sharcigaasi meesha loo saaro si uu waaxda gaashaandhigga u hogaamiyo.